दशगजामा भारतीय चौकी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २९, २०७६ नवीन पौडेल, रूपा गहतराज
(परासी) र (नेपालगन्ज) — सीमा जोडिएको पश्चिम नवलरासीको सीमावर्ती दशगजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अस्थायी चेक पोस्ट स्थापना गरेको छ । दशगजा क्षेत्र नेपाल–भारत दुवै पक्षले प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि यहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले नियमविपरीत स्थापना गरेको हो । भारतको उत्तर प्रदेश र विहारसँग जिल्लाको सीमा जोडिएको छ ।
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–५ को चिमनटोलादेखि सुस्तासम्म दशगजा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले केही स्थानमा एसएसबीले दशगजा क्षेत्रमा सुरक्षा पोस्ट निर्माण गरेको बताए । त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई कूटनीतिक रूपमा जानकारी गराउने बताए । ‘अधिकांश स्थानमा दुवै पक्षबाट पालना गर्नुपर्ने नियम पूरा भएको छ,’ उनले भने, ‘एक/दुई स्थानमा दशगजा छुने गरेर अस्थायी पोस्ट भएको भेटिएपछि तत्काल हटाउन भनिएको छ ।’
सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका तीनवटा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन् । भारततर्फ भने एसएसबीका १० भन्दा बढी पोस्ट छन् । सीमा क्षेत्रमा बीओपी कम भएपछि अहिले पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको गेर्मीमा अर्को पोस्ट स्थापनाको तयारी गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल पश्चिम नवलपरासीका उपरीक्षक भरत खनियाले बताए । त्यसपछि भुजहवामा राख्ने गरी जिल्लास्थित सुरक्षा समितिबाट प्रस्ताव गरी पठाइएको छ । जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीको संयुक्त अनुगमन टोलीले दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका केही सीमास्तम्भ (पिलर) हरूको रङरोगन मेटिएको अवस्थामा पाएको छ । केही स्तम्भका नम्बर मेटिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा १३ वटा प्रमुख र तीवटा सहायक गरी १६ वटा सीमास्तम्भ छन् । सनहीदेखि कुडियासम्म ती स्तम्भ छन् । सीमास्तम्भको मर्मत सम्भार दुवै देशले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सुस्ताको २४ किमि क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन । सीमास्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रूख वा अन्य जैविक सीमाको भर पर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ ।
सीमा छुट्याउनै हम्मे
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको हुलासपुर्वा गाउँपारि भारतीय बजार छ । त्यहीँ नेपाल–भारत सीमा छुट्याउने दशगजा छ । दशगजामै बस्ती छ । वारिपारि दुवैतर्फका बासिन्दाले बसोबास गर्नै नमिल्ने जग्गामा घरटहरा हालेका छन् । बस्ती बाक्लिँदै गएपछि अहिले उक्त क्षेत्रमा दुई देशबीचको सीमा छुट्याउन हम्मे पर्छ ।
नेपाली भूमिमा आएका भारतीयहरू घाम अस्ताएपछि घाँस–दाउरा, वस्तुभाउसँगै फर्कन्छन् । यहाँको बस्तीले गर्दा दुई मुलुकका सीमा प्रष्ट छुट्टिंदैनन् । नरैनापुरकी सबानो शेख चार वर्षअघि भारतीय बुहारी भएर भित्रिइन् । अहिले डेढ वर्षकी छोरी हुर्काइरहेकी छन् । उनलाई कहिल्यै नेपाल छाडेर आएजस्तो लाग्दैन । आँगन पार गर्नासाथ नेपाल टेकिन्छ । पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको माइती पुगेर न्यास्रो मेटाउँछिन् । ‘दिनमा एकपटक माइती पुग्छु,’ उनले भनिन्, ‘परदेशमा बिहे भए पनि नेपालमै छु जस्तो लाग्छ ।’ स्थानीय नौसाद अलि शेख भारतमा काम गर्छन् । फुर्सदमा सीमावारि नेपालगन्ज आउँछन् । ‘हामी दैनिक नेपाल आवतजावत गर्छौं,’ उनले भने, ‘साथीभाइ, इष्टमित्र सबै यतै छन् ।’
अधिकांश दशगजामा बसोबास गरिरहेकाहरू कुन मुलुकका हुन्, पत्ता लगाउन मुस्किल पर्छ । स्थानीय ५५ वर्षीय इलियास शेख पुस्तौंदेखि दशगजामा बस्छन् । सीमास्तम्भले मात्र भूमि छुट्याउँछ । भारतमा भन्दा नेपालमा उनका नातेदार बढी छन् । ‘नेपालतर्फ बढी आवतजावत हुन्छ,’ उनले भने । यहाँ भारतीय र नेपाली रुपैयाँ चल्छ । स्थानीयले दुवै मुलुकको मुद्रा साँचेर राख्ने गरेको बताए । ‘नेपालगन्जमा नभए बहराइचमा उपचार गर्न जान्छौं,’ उनले भने, ‘सामान्य बिरामी हुँदा नेपालगन्जमै सजिलो हुन्छ ।’ आफ्ना दुई छोरीको बिहे बाँकेको जमुनी र सोनवर्षामा भएको उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दशगजामा बस्ती बसाउन पाइँदैन । यहाँ भने सीमा क्षेत्रमा दुईतर्फी बस्ती छ । सीमा संवेदनशीलताबारे जानकारी नभएकाले घर बनाएको उनीहरूले बताए । ‘वर्षौंदेखि यहीं बसेका छौं । कसैले हट्न भनेका छैनन्,’ ककरदरीकी सहजादी शेखले भनिन् । जिल्लाका सीमावर्ती बासिन्दाले दशगजामा पशुचौपाया चराउनेदेखि माटो झिक्न खनेर खाल्डो बनाएका छन् । ‘सँगै जन्मिएर हुर्कियौं,’ बाँकेको हुलासपुर्वाका २९ वर्षीय रामानन्द यादवले भने, ‘देश फरक भए पनि एउटै परिवार जसरी बसेका छौं ।’ उनी भारतीय गाडी चढ्छन् । निर्वाध चलाउन पाइने भएकाले भारतीय गाडी प्रयोग गर्दै आएका हुन् । बिहे पनि भारतमा गरेका छन् । उनका बाबुको ससुराली पनि सीमापारि हो । ‘सबै काम उतै हुन्छ,’ यादवले भने, ‘सामान पनि सस्तो, जान पनि सजिलो ।’ नरैनापुर गाउँपालिकास्थित घोडादौडिहामा सीमामा टहरा बनाइएको छ । उनीहरू मिलेर बसेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०७:३६
१९९७ माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमालाई फाँसी दिइँदा रेणुदेवी चार वर्षकी थिइन्, अहिले ८३ वर्ष पुगेकी उनी आफ्ना बाबुहरूले केका लागि, किन लडेका थिए भनेर अझै बुझ्न–बुझाउन नसकिएको बताउँछिन् ।
माथि बस्नेलाई सुख होला, आम जनतालाई दु:खै छ । – रेणुदेवी, सहिद धर्मभक्तकी छोरी
मंसिर २९, २०७६ देवेन्द्र भट्टराई
(ललितपुर) — ‘यस अभागीकी आमा मरी, बाबु अर्थात् मेरो जीवनको कुनै ठेगान छैन, जुनसुकै बेला जेसुकै पनि हुन सक्छ । यो तिम्री पनि छोरी हो । सकेदेखि यसको लालनपालन एवं शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरिदिनू, नसके कुनै अनाथालयमा राखिदिनू...।’
भारतको कोलकातामा संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेका बेला संवत् १९९६ मा युवा धर्मभक्त माथेमाकी श्रीमती उत्तरादेवीको निधन भयो । त्यसबेला धर्मभक्तसँग ३ वर्षीया छोरी रेणुदेवी मात्रै साथमा थिइन् । राणाकालीन शासनको विरोध र स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्नमा अग्रणी रहेमध्येका धर्मभक्त नेपाल प्रजा परिषद् पार्टीमा सक्रिय थिए । उनी कोलकाताबाट विशेष काममा काठमाडौं फर्कंदै थिए । त्यहीबेला उनले आफ्ना भाइ ध्रुवभक्तलाई नाबालिका छोरी रेणुको हेरदेख गर्न बिन्ती गर्दै भनेको माथिको पंक्ति यतिखेर इतिहासको ‘अभिलेख’ झैं बनेको छ ।
धर्मभक्तलाई फाँसीको सजाय दिइँदै गर्दा उनकी एकमात्र छोरी रेणुदेवी चार वर्षकी थिइन् । ‘मैले आफ्ना बाबुबारे नेपालका प्रथम सहिदमध्ये एक भनेर किताबमा पढ्न पाएँ, ठूलाबडाले भनेको किंवदन्तीजस्तै लाग्ने कुराबाट बाबुबारे थाहा पाएँ,’ काका ध्रुवभक्त र काकी वृन्दादेवीले छोरीसरह हुर्काएबढाएकी उनै छोरी रेणुदेवी शनिबार सानेपा, ललितपुरको एउटा जमघटमा सुनाउँदै थिइन्, ‘बुबा धर्मभक्तसहित त्यो बेला राणाशाहीविरुद्ध लडेकाहरूबारे आज मेरा नातिनातिनाले पुस्तकहरूमा उसैगरी पढिरहेका छन् तर ती अमर सहिदले केका लागि, किन लडेका थिए भनेर अझै बुझ्न–बुझाउन सकिएको छैन ।’ तत्कालीन राणाशाहीले धर्मभक्तलाई ३२ वर्षकै उमेरमा १९९७ माघ १३ गते फाँसी सजाय दिएको थियो ।
८३ वर्षीया रेणुदेवी केही वर्षयता छोराका साथमा अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा बस्दै आएकी छन् । दसैं–तिहारका अवसर पारेर काठमाडौं आएकी उनी शनिबार अर्को एक अवसर पनि कुरेर बसेकी थिइन् । आफ्ना काकाबुबा ध्रुवभक्त माथेमाका बारेमा लेखिएको इतिहाससम्बन्धी पुस्तक विमोचनमा आफ्ना पितापुर्खाको योगदान सम्झन पनि चाहन्थिन् । ‘बुबाहरूको राजनीतिक कर्मकै कारण माथेमा खलक देशनिकालामा पर्‍यो । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ लगेर काकाबुबाहरूले थुप्रै हन्डर खाँदै हामीलाई पढाउनुभयो, बढाउनुभयो,’ रेणुदेवी भन्छिन्, ‘पछि राजा त्रिभुवनले देश फर्कने अनुमति दिएपछि मात्रै हामी यताका भयौं ।’
भारतको इलाहावादबाट गृहविज्ञानमा स्नातक गरेपछि काठमाडौं फिरेकी रेणुदेवीले महेन्द्र आदर्श विद्याश्रममा झन्डै ३० वर्ष लगातार पढाइन् । त्यसपछि बुबा धर्मभक्तका नाममा नख्खु, ललितपुरमा विद्यालय खोलेर अनाथ–विपन्नका लागि समेत सहयोग पुग्ने गरी कक्षा चलाइन् । ‘मेरो बुबाको पुस्ताले राणाशाहीविरुद्ध जीउज्यान दियो,’ रेणुदेवी भन्छिन्, ‘पछि पञ्चायत भनियो, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र हुँदै अहिले लोकतन्त्र भनिएको छ । लोकतन्त्रका नाममा दलहरू हरहमेसा झगडामा व्यस्त देखिन्छन् । सधैं पद, कुर्सी र शक्तिकै लडाइँ देखिन्छ । एकातर्फ सहिदहरूले सुधारिएको शासन–पद्धतिको चाहना राख्दै आफ्नो जीउज्यान त्याग्ने र अर्कातर्फ सहिदको सपना भन्दै मञ्चबाट अनेक मीठा कुरा सुनाइरहने विरोधाभास ज्युँका त्युँ छ ।’
सहिदपुत्री रेणुदेवीले पछिल्ला वर्षमा भने सहिदको ‘सही अर्थ’ बुझ्न सकेकी छैनन् । ‘लोकतन्त्र आएको कुरामा केही हदसम्म सहिदको सपना पूरा भयो होला । तर, साधारण जनताले गरेको गाँस–बास–कपासको अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘म ५० वर्ष नपुग्दै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेर सरकारका योजना र कार्यक्रम आएका हुन् । आज म ८३ पुगें, तर काठमाडौंमा मेलम्ची सपनामै सीमित छ ।’
रेणुदेवीका बुझाइमा नेपाली जनताको विशेषता भनेकै ‘सहन सक्ने शक्ति’ हुनु हो । ‘जेजस्तै कठिनाइ पनि सहन सक्ने अर्थमा नेपालीलाई वीर पनि भनिएको होला,’ उनी भन्छिन्, ‘राज्य पद्धतिमा माथि बस्नेलाई सुख होला तर आम जनतालाई दु:खै छ । कहिले सहिदका सपना, कहिले नेताका सपना भनेरै टार्ने गरिएको छ ।’ अझ सहिद चिन्ने–चिनाउने कुरा गर्दा ‘कसलाई सहिद भन्ने ? किन भन्ने ?’ भन्ने तहमा आफू पुगेको उनी सुनाउँछिन् । ‘गाडीले कुल्चेर मरे पनि सहिद, झ्यालमा घाम तापेर बसिरहेका बेला गोली लागेर मरे पनि सहिद... । सहिद ज्ञात–अज्ञात कति हो कति,’ रेणुदेवीलाई लाग्ने गर्छ, ‘तानाशाही शासनशैलीविरुद्ध देश र जनताका नाममा हाँसीहाँसी फाँसीमा चढ्न तयार धर्मभक्तहरूको इतिहासको आज के अर्थ रह्यो त ? धर्मभक्त, शुक्रराजहरू सहिद कि को सहिद ?’ चार सहिदको इतिहाससमेत भुलेर सहिदगेट भत्काउनेसम्मको राजनीतिक प्रयास भएको सुनेर उनी अचम्ममा परेकी रहिछन् ।
१४ वर्षअघि प्रकाशित प्राध्यापक भवेश्वर पगेनीले लेखेको ‘सन्दर्भ सहिद धर्मभक्त, चर्चा भाइ ध्रुवभक्त’ पुस्तकको अंग्रेजी अनुवाद ‘द लाइफ एन्ड टाइम अफ ध्रुवभक्त माथेमा’ केशवभक्त माथेमाले निकालेका हुन् । पुस्तकको विमोचन शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले गरेका थिए । पुस्तकबारे राजनीतिज्ञ दमननाथ ढुंगाना, अनुवादक केशवभक्त माथेमा र मूल लेखक पगेनीले टिप्पणी गरेका थिए । बुबा ध्रुवभक्तको स्मृतिमा छोराहरू केशवभक्त, केदारभक्त र माधवभक्तले पुस्तक विमोचन समारोह आयोजना गरेका हुन् । ध्रवभक्तको ०६६ साउन १ गत निधन भएको थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २९, २०७६ ०७:३३